Mgbapụta Kovid-19 na-aga n'ihu na mba anyị na ụwa | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraỌrịa Kovid-19 na-aga n'ihu na-agbasa na mba anyị na ụwa
08 / 04 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, coronavirus, OGBU NIILE, Turkey
Ọrịa Kovid ka na-agbasa n’obodo anyị na n’ụwa niile
Ọrịa Kovid - ntiwapụ iri na itoolu ka na-agbasa na obodo anyị na ụwa. Kwa ụbọchị na mba anyị, dị ka ụwa, a na-ewere usoro ọhụụ kwa ụbọchị iji gbochie ọrịa ahụ, ebe ndị na - emerụ ahụ n'ihi ụdị coronavirus ọhụrụ na-abawanye.
Kovid na Turkey - 19 bụ ihe kasị mkpa obodo na-alụso ọrịa, ndị Ministry of Health Science Board coronavirus. Kọmitii ndụmọdụ ahụ, Fahrettin Koca, Onye Mịnịsta ahụike na-ahụ maka ya, nwere ndị ọkà mmụta sayensị ahụike bụ ndị ọkachamara na ngalaba ha. Otu n'ime aha dị mkpa dị na bọọdụ a bụ Ọkachamara Ọrịa Ọrịa Chest nke Mahadum Karadeniz. Dr. Tevfik Özlü. Özlü, ka ọ gara n'ihu na mgba ya dị ka dibịa na ọrịa coronavirus, dịka onye sayensị, na-agba mbọ ịgwa ọha na eze etu o kwere mee. N'ọnọdụ a, taa, na mgbasa ozi nkwukọrịta nke Radio Traffic, Kovid - zara ajụjụ anyị banyere ihe ntiwapụ 19 ahụ.
“NNA ANY IS ANY TO B PBARA Ihe Dị Ka Ọ D IN KA EGO NA-EWUTE EGO NA-AM THETA”
Onye otu Kọmitii Sayensị Coronavirus Dr. Tevfik Özlü kwuru na ntiwapụ a ka na-akpa mba ike. Özlü kwuru, "China dị ka egbuola ọrụ a na ọkụ. Ewezuga nke a, ọkụ na-aga n'ihu na Germany, mana mmebi ahụ belatara nke ukwuu, ha na-ewere usoro a na-achịkwa. Ná mba ndị dị ka South Korea na Singapore, e nwechabeghị mmebi a. ” Ọ kọwazie na usoro a ka emebi na Europe na USA:
"Mgbe anyị lere anya na Europe n'ozuzu, anyị nwere ike ikwu na usoro ahụ mebiri emebi ma laghachi n'ọkụ dị na ,tali, karịsịa Spain, France, England na ọbụna na USA."
Tụnyere mba ndị agbata obi nke ntiwapụ na Turkey, na-asị na usoro egosi na a ga dịtụ ọzọ na-achịkwa Prof. Dr. Özlü na-aga n'ihu dị ka ndị a:
"E jiri ya tụnyere mba ndị a gbara ya gburugburu Turkey yiri dịtụ calmer na ndị ọzọ na-achịkwa dị ka nke ugbu a. N’ezie, ọ bụrụgodi n’oge, anyị na-agbaso ihe ahụ mere n’azụ. Ugbu a ebumnuche anyị niile bụ igbochi ihe merenụ site na iji usoro ndị a dị ka Europe. N'ihi na anyị nwere ike ijikwa ndị ọrịa anyị ugbu a, ọ dịghị onye ọrịa anyị na-ekpughere, mana ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa na-abawanye, usoro ahụ nwere ike pụọ, yabụ anyị nwere olileanya na mmachi ndị a ga-emetụta usoro ahụ kpamkpam. Enwere m olileanya na agaghị enwe mmụba na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrịa anyị na ndị ọrịa anyị nwụrụ na ụbọchị na-abịanụ, anyị ga-ebikọkwa ọnụ maka ahụ ike ka mma. ”
“EBAYRAY HAVEB HAVERAM AMBỌCHAM NSOGBU”
prọfesọ Dr. Tevfik Özlü kwuru na ndị na-eto eto na-enweghị ọrịa na-ekweghị ala ala nwere ike ịkwụsị ọrịa ahụ. Agbanyeghị, ọ na-ekwupụta na mmebi na-adịgide adịgide nwere ike ịdịgide na ndị gbakere:
Ugbu a, n'ezie, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bu nje a, karịsịa ma ọ bụrụ na ha enweghị ọrịa na-adịghị ala ala, nwere ike ịlanarị nwayọ ma enweghị mmerụ ahụ. Ihe ruru 15% nke ndị ọrịa n'ụlọ ọgwụ na-agbake na ọgwụgwọ yana laghachi n'ụlọ na-enweghị mbibi ọ bụla. Mana anyị nwere 5% - 6% ndị ọrịa dị oke egwu, ọ bụ ihe nwute na ha adịghị adị ka nke ọma. Ọnwụ na-esitekarị na ndị otu a 5%, ọ dịkwa mwute na ndị gbakere mgbe ụfọdụ nwere mmebi na-adịgide adịgide. Mana ihe kachasị mkpa n'ọgụ a na-alụ megide nje a abụghị ibute ọrịa a .. Ọ bụ ihe kachasị nchebe. Ihe kwesịrị ilekwasị anya kachasị bụ ihe a ga-eme ka ọ ghara ibute ọrịa a. ”
AKWOMKWỌ EZI NA-EGO maka ndị ga-ahapụ ya
Kovid na Turkey - 19 e ọtụtụ jikoro mbuso oria a ogu. Agbanyeghị oge ịtụpụrụ ụfọdụ afọ dị iche iche, ụfọdụ isi ihe mechiri maka ịbanye - mpụga ma ọ bụ iche. A maara na ikewapụ ọha na eze bụ isiokwu kachasị mkpa na mbuso oria a agha. Agbanyeghị, na obodo anyị, ọtụtụ ụmụ amaala ka nwere ịpụ n'ihi ọrụ. prọfesọ Dr. Tevfik Özlü na - atụpụta ndị a maka ndị ga - apụ apụ:
Nke mbu, ha kwesiri i hapu ha nihi nkpa odi na ya ka ha gha apughi wezuga ma ọ bụrụ na enweghi ọnọdụ. Ka ha pụta maka ọrụ, maka ọrụ, maka mkpa, mana ọ bụghị maka ha ịnụ ụtọ ya. Nke a bụ nke mbụ. Nke abuo; Ha kwesịrị ịgbalị ịghara ịbịaru ndị ọzọ nso, wee gbaa mbọ idobe mita 1 ruo 2 n'oge a. Yabụ 1 - 2 mita anya abụghị 100%, kama ọ bụ ezigbo nchekwa, nke zuru iji gbochie ya oke oke. Ma ọ bụrụ na ọ dị oke mkpa ịmalite mmekọrịta n'etiti ndị ọzọ na-enweghị ike idobe anya a 1 - 2 mita, ọ nwere ike ịbụ ọrụ. Kpachara anya kpachara anya ha na onye nke ozo ime ihe nkpuchi ma dikwa onye nke ozo aka na nti. Ọ bụrụ na o yighị nkpuchi; ‘Biko mechie ọnụ gị, mechie imi gị!’ Ikekwe ịbụ ihe nkpuchi n’oge a, kama ha kwesịrị ịrịọ ha ka ha were ịchafụ ma ọ bụ ịchafụ kpuchie ọnụ ha na imi ha ma ọ bụ akwa ma ọ bụ anụ ahụ. Ka ha jiri masks n'onwe ha. N'ihi na nke a nwere ike ịgafe ọbụlagodi n'oge okwu, nje nwere ike ibunye ngwa ngwa, ha nwere ike bute ọrịa ahụ ozugbo na-amaghị. Ewezuga nke ahụ, ọ dị ezigbo mkpa ka ha nwaa ịghara imetụ ihe ndị ọzọ nwere ike imetụ aka. Ka ha nwaa ịghara imetụ ebe mmadụ niile nwere ike imetụ ya aka aka, ọ bụrụ na ha emee ya - ha nwere ike imetụ ya aka ma ọ bụ na ọ gaghị, yabụ, ha ga-eji mmiri na ncha kwọọ aka ha ozugbo, gbalịakwa ịghara itinye aka ha n'ọnụ, imi na ihu. Phe gbasara paplic, ebe paplic adịghịzị nchekwa. Restaurantslọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ mposi ọha, ụlọ ebe ndị ọzọ na-anọ na ihe ndị ọzọ bụ ebe kwesịrị itinye nlebara anya na nke a. Mgbe ha metụtara sọọsọ metụtara ya, aka ha nwere ike imetọ ebe dị ka ebe a na-asa ahụ, batrị, aka aka, bọtịnụ mbugo, wdg ma bute ọrịa. Ha ga-eji ncha na mmiri sachaa aka ha, ha ekwesịghị imetụ anya ha, ọnụ ma ọ bụ imi aka na-asaghị ahụ. Mgbe ha laghachiri n’ụlọ ha, ha kwesịrị ịbanye n’ime ụlọ ịsa ahụ wee saa mmiri, wepụ uwe ha, ma ọ bụrụ na a sachaa ha, saa ha, ma ọ bụrụ na a saghị ha, ha kwesịrị inwe mbara ihu na ikuku. Ka ha kpọtụrụ ndị ezinụlọ ha na ụlọ ha site ugbu a gaa n'ihu, ha ekwesịghị imetụ onye ọ bụla aka tupu oge ahụ.
Ọ bụrụ na enwere agadi nwanyị, nna, onye ọrịa, ọ bụrụ na enwere ndị nwere nsogbu adịghịzi ya, ha kwesịrị ịgbalị ikewa ha na ha ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Ebe ọ bụ na ha nwere ike ibute nje ahụ site na mpụga, ha nwere ike ha agaghị arịa ọrịa ma ọ bụ nwee ahụike, mana ha nwere ihe egwu nke ibunye ya ndị mmadụ n'ụlọ, yabụ ha kwesịrị ichebe ndị ikwu ha. ”
Anyi a di n ’ulo?
Iwu kachasị mkpa iji zere nje ahụ bụ ịnọpụ iche na ịnọrọ n'ụlọ ọ gwụla ma ịkwesịrị. Ọ dị mma, anyị ga - eche na anyị enweghị nchekwa n'ụlọ? prọfesọ Dr. Azịza Tevfik Özlü maka ajụjụ a bụ:
“Ọ bụrụ n’ nọ n’ụlọ, ọ dịghị ihe ga-eme gị, ma ọ bụrụ na imeghe ụzọ, nsogbu agaghị adị. N'ikwu ya, mgbe mmadụ kụrụ aka n'ọnụ ụzọ gị… Anaghị m ekwu banyere ezinụlọ gị, ezinụlọ gị, onye ezinụlọ gị, onye agbata obi gị, onye agbata obi gị nwere ike ịbụ onye ị hụrụ n'anya ... Ọ bụrụ na ị na-emeghere ya ụzọ, ị nweghị nchebe. N'ihi na nje a abanyeghị na windo ma ọ bụ anwụrụ ọkụ. Ọzọ ga-ewetara gị nke a. Onye wetara ya ga-abụ ọkacha mmasị gị, ezigbo enyi na onye ikwu gị. Onye si n’ebe dị anya agaghị ewetara gị ya.
Agbanyeghị, hookah ma ọ bụ karama ahụ nwekwara ike iweta gas. N’ihi ya emeghela ọnụ ụzọ gị, ma ọ bụ yikwasị nkpuchi ma ọ bụrụ na ị ga-emeghe ya. Mechie onye nke ozo ka ochie ya ka o were owa nke ogu abuo na abuo. Ejila onye obula la oru, adighi oge ahu ozo. otú ahụ; Oge abụghị oge ịnọdụ, ịnọnyere ndị enyi, ileta ụlọ. ”
GN SH ka anyị kwesịrị itinye n'ọrụ AHUIKE AHUIKE?
Ọnụego mgbasa nke ụdị coronavirus ọhụrụ ahụ na-echegbu onwe ya. Eziokwu ahụ bụ na enwere ọtụtụ ikpe na ndị ọrịa n'otu oge na-akpali usoro ahụ ike. Na mgbakwunye na igbochi ịgbasa, a maara na a na-eme ihe ndị a iji lekọta ndị ọrịa niile na-emeghị ahụ ike.
Kedụ ka onye chere na ha nwere Kovid - akara iri na iteghete n’egwuregwu dị otú a ga -eme omume? Kedu ihe na ogologo ole ka anyị ga-eche iji tinye n'ọrụ ndị na-ahụ maka ahụike? Ajụjụ ndị a nwere ọnọdụ dị mkpa n'uche ọtụtụ ụmụ amaala taa. prọfesọ Dr. Tevfik Özlü na-aza ajụjụ ndị a ma na-agwa ihe ị ga-eme:
Ugbu a, anyị niile nwere ike inwe obere nsogbu na mkpesa site n'oge ruo n'oge. Nke a apụtaghị na anyị na-arịa ọrịa na Kovid ozugbo. N'oge a, ọ dị ize ndụ ịga ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ ahụike na mkpesa ọ bụla. N'ihi na agbanyeghị na ị bụghị Kovid n'oge a, enwere ike ibute ya n'ụlọ ọgwụ ị gara. Yabụ eziokwu, gịnị ka anyị na-ekwesịghị ị toa ntị? Nke mbu, ndi oria Kovid nwere aru kariri ma obu karie. Ọbụlagodi na ọ bụghị na mbido, ahụ ọkụ ahụ na-etolite n'ime ụbọchị 1, ụbọchị abụọ. Inwe fever abụghị naanị ahụ ọkụ, enwere ụkwara ugboro ugboro. Ughkwara, ụkwara, akọrọ, ụkwara. bya emee g'ẹphe je ezhia ya ike. Mana ha atọ ekwesịghị ịnọkọta ọnụ. Inwe fever na ụkwara ezuru maka ngwa ahụ. Ọ dị mma, enwere ike ịnwe ọkụ na ụkwara? Nwere ike ịbụ. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịmalite site na ụkwara. Ma ọ bụrụ na ọnọdụ izugbe gị dị mma, ọ bụrụ na ọnweghị oke ọkụ, ọ bụghị ụkwara isi ike nke ukwuu, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu iku ume, ma ọ bụrụ na ị bụ nwata, ọrịa na-adịghị ala ala; Y’oburu na enweghi oria, obara mgbali, obia obi, odighi mma ịnọ n ’onodu a. Yabụ na ọ dị mma ka ị chere obere oge ka ị na-achọ n'ụlọ ọgwụ, ya bụ, lelee onwe gị maka ahụ ọkụ. N'ihi na n'ime otu a, ọ naghị enwe ọganihu n'ozuzu ya ma na-emeri ya site na iguzo ya, ọ dịghịkwa mkpa ọgwụgwọ. Ma, dịka m kwuru, ahụ ọkụ na ụkwara, karịsịa nsogbu iku ume, nwere ike ịbụ ma ọ bụ ghara ịbụ mgbaama nke atọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ a ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị bụ agadi ma ọ bụ nwee ọrịa na-adịghị ala ala, ọ ka mma itinye ya n'ọrụ n'enweghị ichere. ”
OLEE G MUN RE BF EGO NA-EKWES THATR SOM WB WRTH ILLB E ỌGW ORR OR Ọ B SL ỌR SL N'SLLỌ NCHE?
Otu ihe dị mkpa a na-ekwu banyere ụdị coronavirus ọhụrụ bụ na nje ahụ ga-efunahụ ya n'oge ọkọchị. Fọdụ ndị isi ụwa kwudịrị na nje ahụ ga-apụ n'anya n'oge ọkọchị mgbe ọrịa ahụ malitere ịgbasa na Europe. Nke a ọ bụ na ọ ga - ekwe omume ma ọ bụ kwuo okwu kpamkpam? prọfesọ Dr. Özlü kwuru na nke a nwere ike ịbụ ebe dị n'etiti oke abụọ a:
Ọ bụghị sayensị, mana ọbụghị asparagas. Olile anya di n’ebe a, ka m kwuo ya. Nke a bụ ebe dị n'etiti nsọtụ abụọ. N'ihi na anyị maara na ọrịa coronavirus na-abịakarị na ụmụ mmadụ na-abụkarị n'oge oyi na njedebe n'oge ọkọchị. Ọ na - eme mgbe niile, a na - emegharị ha kwa afọ. Ma ndị a abụghị Kovid ọhụrụ, n'ezie ndị ọzọ Coronaviruses. Ọzọkwa, SARS bụ ọrịa yiri nke coronavirus a. Ọ kwụsịrị mbata nke oge ọkọchị ọzọ. Yabụ enwere atụmanya dị otú ahụ, ụdị olileanya a maka coronavirus a. N'ezie, nke a abụghị naanị ihe metụtara ikuku ikuku, mana mgbe ọ na - ekpo ọkụ, enwere anyanwụ na ikuku, anyanwụ na - ebelata ike na nje na - efe efe site na iji ọkụ ultraviolet ma bibie ya n'oge dị mkpirikpi. Ọzọ, mmiri dị mkpa, a na-etinye nje ahụ ọsọ ọsọ na mpaghara akọrọ. Ya mere, atụmanya dị otú ahụ adịchaghị adị na mbata oge ọkọchị na okpomoku nke ihu igwe. Ma enwere atụmanya dị otú ahụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ nile, n'ụwa nile, dị ka echiche sayensị, ọ bụghị nanị dị ka ihe ọmụmụ mgbakọ na mwepụ, kama ọ bụ dị ka olileanya. ”
"SIMILAR OUTBREAKS, ANYI NA ANA EGO NA-EGO EGO"
Ihe a kpọrọ mmadụ ezutewo ọrịa na-efe efe ruo ugbu a. Agbanyeghi na enwere mfu nwute, enwere ike imeri ha niile. Kovid - oria ojoo 19 ga - abụkwa ihe omume hapụrụ anyị n’ọdịnihu anyị amabeghị. Yabụ, ụwa ọ ka ga-adịkwa ka anyị siri mara ya? Ànyị nwere ike ịga n'ihu na otu ụdị omume na omume ndị a mgbe oke a gasịrị? prọfesọ Dr. Echiche Tevfik Özlü banyere okwu a bụ ndị a:
“N’ezie, echere m na nje a bụ nchọpụta, mkpu na-egosi na ihe agaghị aga nke ọma n’ụwa anyị bi na ya taa, anyị na-ewu ụlọ, na ihe niile adịchaghị mma. Okwu a nwere ike ọ gaghị amachaghị ọrịa coronavirus ọhụrụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ka nwere ike ịnagide ntiwapụ na iyi egwu yiri ya. Echere m na ahụmịhe a dị mkpa na etu anyị si ebi n'ụwa, ebe anyị bi ugbu a, ebe anyị nọ na nsogbu, ebe anyị nọ n'ọnọdụ adịghị ike, nke a na-egosikwa anyị mmejọ. N’ihi na m na-eche na ndụ agaghị adị n ’oge mbụ. A ga-enwe ọtụtụ mgbanwe na ndụ anyị ma nke ahụ mechara. Onye obula, n’aghaghi agha n’iile mba, ndị mmadụ niile, mmadụ niile bu ụzọ hụ na ụdị ihe egwu a nwere ike ịkpatara ha nnukwu nsogbu ma gbanwee ndụ ha niile. Ọ bụ ya mere m ji chee na ahụmịhe a ga-adịgide adịgide site ugbu a gaa n'ihu. N'ihi na ndị mmadụ nwere ike ichefu ihe na-eme ha, mana ha anaghị echefu mmetụta ha. Jọ, ụjọ, nchekasị, ụjọ nke na - eme ugbu a ... Ọ gaghị ekwe omume ichefu ihe ndị a. Echere m na ndị a ga-eduga mgbanwe ga-adịgide adịgide. A ga-ajụ ajụjụ banyere ịdị ọcha, a ga-ajụ ìgwè mmadụ ajụjụ. Ugbu a, anyị ga-akpachapụ anya ma ọ bụ na-adịghị njikere mgbe anyị ga-aga egwuregwu, ịga nnọkọ oriri na nkwari, ịga egwu egwuregwu, ịga sinima, ụlọ egwuregwu, ma ọ bụ omume anyị gbasara okwu ndị a, nzukọ ndị a ga-agbanwe. Transportationgbọ njem ọha, nnukwu obodo mepere emepe, obodo ebe nde mmadụ nde 15-20 na-ebi, ndụ ebe igwe mmadụ na-adịghị ike, agaghị enwe ike ijide ajụjụ. Ọrụ ugbo abụrụla ihe dị mkpa, mana ọ ga-adịkwu mkpa. Industrylọ ọrụ ọkọnọ ga - enweta enyemaka dị mkpa. Echere m na ụwa dijitalụ na-abawanye ụba na ndị mmadụ. Ndị mmadụ ga-amalite ịbụ ndị onwe ha na ịchọkarị ọdịmma onwe ha, ikekwe karịa ịchọ ọdịmma onwe onye nanị. Mba dị iche iche ga-etinyekwu ego na ụlọ ọrụ ọgwụ, ngalaba ahụike ahụike na ọrụ ubi iji wee nwee afọ ojuju. Echere m, echere m na ọtụtụ ihe, ọtụtụ nghọta ga-agbanwe. Ma ndị a bụcha echiche. ”
“O nweghị onye nọ nchebe”
Onye otu Kọmitii Sayensị Coronavirus Dr. Tevfik Özlü nwekwara ịdọ aka na ntị na ndụmọdụ ndị a maka ụmụ amaala:
"Ihe kasị mkpa n'oge Turkey, anyị na-agafe agafe site a nnọọ oge pụrụ iche. Izu abụọ a dị ezigbo mkpa ma anyị kwesịrị iji ọnọdụ na ịkpachara anya kpọrọ ihe. Biko onweghi onye ga-asị 'Ọ nweghị ihe ga-eme m!' ka i ghara asị. N'ihi na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ibe m, ndị enyi m, ndị ọrụ na - alụ ọgụ ugbu a maka ngwaọrụ iku ume keakpọ mmiri na ngalaba nlekọta ahụike. Naanị ụbọchị atọ gara aga, ha guzo dika m. Ha dị ka gị. Yabụ na nke a abụghị egwuregwu, a na-ekesa ya ngwa ngwa ma mgbe ụfọdụ ọ na -eme ezigbo ete. Ọ bụ ya mere onye ọ bụla nwere nnukwu ọrụ ugbu a. Dịka m kwuru, ụzọ gị kụrụ aka, you ga-emeghe ụzọ gị Ozugbo ị mepere ya, mmadụ nwere ike iweta nje a. Ọ bụrụ na ọdịghị ihe na-eme gị, ọ nwere ike ịbụ nwunye gị, ọ bụrụ na ọ bụghị nwunye gị, ọ nwere ike ịbụ nna gị, nne gị, nwa gị. M kiriri vidio ndị dị na Italytali. Ahụrụ m na ụmụaka ndị ahụ nọ n'agbata afọ asatọ na afọ iri enweghị ike iku ume na ighara mmiri, nke a wutere m nke ukwuu, iwe were m nke ukwuu. O nweghị onye dị nchebe. Achọrọ m ịgwa mmadụ nile na a na-anụ olu m ya: ‘Biko nọrọ n’ụlọ, biko nọrọ n’ụlọ!’ Apụla, anụla ya ụtọ nke ukwuu. Ewebatala onye ọ bụla n'ụlọ gị. Ma ị bụ onye ikwu, enyi, ma ọ bụ onye agbata obi, ewerela ya. Emeghela ọnụ ụzọ gị ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa. Ọ bụrụ na i mepee ya, nọrọ ebe dị ihe dị ka mita 3 ruo 8. Ndị a dị ezigbo mkpa. Naanị ndị a ga-echebe gị. Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ụlọ, ị nweghị nchebe, onweghị ihe na-emenụ. Ya 'Turkey Mụrụ n'ụlọ!' Ana m ekwu, n’ezie achọrọ m ka m lebara ndị ọrụ nchịkwa na ógbè niile, ndị gọvanọ, ndị gọvanọ distrikti, ndị isi na ndị ọrụ mmanye iwu: ihe na-eme, ka ha nyochaa usoro mgbochi ndị a ma dọọ ndị na-anaghị eme ya aka. Ka ha tinye akwụkwọ ikike ahụ ma ka anyị jiri usoro a kacha obere merụọ usoro a. "
Hiby News Agency
Ụgbọ okporo ígwè Batman-Diyarbakir nọgidere na-agbaji windo nke ụgbọ oloko ahụ
Ụgbọ njem okporo ụzọ na Turkey
Yilmaz Reducer Produced the First Domestic Tram Motor and Gear Box na Turkey
Onu ogugu ndi mmadu na-akpo ALO ​​181 na abawanye site na mwepu Kovid-19
Ọrịa Covid-19 iji mee ka mkpokọta nke njikọ ijikọ ụwa ọnụ kwụsị
Oti mkpu Kovid-19 na Istanbul Metro ..! Ọnọdụ ntụ oyi na-agbasa Nje Virus
Kọmitii Sayensị Coronavirus
Kovid - akara 19
A ga-egbochi Kovid-19 site na Nrụpụta Ihe Mgbapụta Ọrịa
Taa na History: 9 April 1921 nzuko omeiwu, site n'iwu Anatolia-Baghdad Ụgbọ okporo ígwè
Ankara-Yozgat-Sivas YHT na-akwadebe imeghe
Turkey si n'ezinụlọ ụgbọ okporo ígwè akwa njikere maka oghere iji okporo ụzọ | Elazig-Malatya
Okporo ụzọ na-ebelata n'ike n'ike ebe Coronavirus na-agbasa gburugburu ụwa
Ihe gafere, nke amalitere iwuru na Ogige ụgbọ okporo ígwè Izmit, echere ọnwa